SIR CULUS DIIDMADA DHISID CIIDANKA XOOGA DALKA SOOMAALIYEED | Lughaya.Com
Waxaan wada ogsoonahay in dalka soomaaliyeed lahaa ciidanka xooga qaranka soomaaliyeed oo difaaci jiray dalka bad,cir iyo dhulba.hayeeshee nasiib daro wuxuu burburay 1991 oo dalku galay dagaalo sokeeye.Markii ciidankii meesha kabaxay waxaa lumay amaankii gudaha gabi ahaan tiiba,kadibna waxaa soo galay cirkii iyo badii iyo barigiiba cadawgii shisheeye.
Shaki malaha in dal aan lahayn ciidan suga amaanka aan lagu tilmaami karin dal xor ah oo jira.Hadaba shacabka soomaaliyeed oo ku daalay dawlad la aan amaan daro joogta ah ayaa 26 sanadood dawladii dhalataba kasugaayay dhisid ciidan qaran. Tusaale gaaban adoon meel dheerba sii aadin bal hada eeg sida ay ku jaawaabi jirtay dawladii hada u danbaysay ee Xasan sheekh siday uga jawaabi jirtay suaashii shacabka ee ahayd maxaa loo dhisi layahay ciidankii xooga dalka soomaaliyeed si ay noo bad baadiyaan oo amaankayaga usugaan dhanwalba? Xasan sheekh waxa uu shacabka ku qan cin jiray oo jawaabtiisu ahayd” Aduunkaan inoo ogolayn ciidan qaran ama milatarigii xooga soomaaliyeed in aan dhisano.”
Hadaba shacaboow laynooma ogola ciidan in aan dhisano ayuu oran jiray xasan sheekh iyo kuwii ka horeeyayba.Waxaan rabaa in aan daaha ka qaado oo cadayno labo sababood oo keenay in dawladihii ka horeeyay tan maanta curatay oo curdanka ah ay u dhisi waayeen dhab ahaan milatarigii soomaaliyeed.
1.Dhulkii beeraha ee koonfurta soomaaliyeed gaar ahaan shabeelada hoose iyo jubooyinka iyo hantidii shacabka soomaaliyeed ka qaxay 1991 ee casimada MOGDISHO oo dad ku habsadeen oo ay haystaan ilaa hada.Madax wayna yaasha dalka soomaray waxay ka soo jeedaan badan koodu dadka haysta beeraha deegaanada iyo hantidii caasimada tiil ee soomaali ka dhaxaysay.caadifada iyo xanuunka iyo dhibaatada dagaaladii sokeeye iyo dawlad la aantii ayaa waxay sababtay in Madaxwaynayaashii nasoo maray iyo beelihii ku habsiga sameeyay ay u arkeen oo ku heshiiyeen islana qaateen in khayrkuba ku jiro in cidwaliba waxay maroorsatayhaysato.Si hadafkaasi ay u ilaashadaana ay ka feejignaadaan in lahelo dhismo ciidankii xooga soomaaliyeed kaasoo nin walba xaqiisii u celin doona! argagax bayna ka qabaan ciidan iyo sheeg sheegiis intaba.Waxaa la qumanaatay dalku in uu sidaa iska ahaado hawadooday raaceen iyo camal shaydaan.
Nin guri islaameed u dhacay oo maryo ka soo xaday nin bilays ah oo mudh kusoo yiri jeclaan maayo!! Ilaahay amarkiis waa laba nin oo isneceb ismana aaminayaan.Tani waa sababta koobaad ee ay aamin sanyihiin kuwa diidan ciidan in la dhiso.
2.Cadaw shisheeye oo gacanta ku dhigay madaxwaynayaasheenii xasan sheekh u danbeeyay,cadawgan oo hadafkiisu yahay curyaamin ah in dalka soomaaliyeed uu san dib danbe u dhisan ciidankiisii burburay ee xooga,kaasoo hadii la dhiso dalku yeelanayo dawlad dhab ah oo shaqaysa nidaam kala danbayn iyo xoriyad buuxda. soomaalida ku maah maahda “ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa” sidaa daraadeed madaxwayne ku qanacsan shilimaan iyo arimo hoose waa caadi in la rarto oo la isticmaalo kadibna uu iska ahaado dabadhilif khaa inu wadan ah oo shisheeyaha u khaadima.
Hadaba si indhaha caalamka loo khaldo ayaa waxay sameeyeen khiyaano ah in kuwii haystay beeraha deegaanada iyo hantidii MOGDISHO ee soomaali ka dhaxaysay layiraahdo soo dirsada wiilashiina oo iyagii laga dhigo ciidan qaran oo tuuto loosoo xiray! halkan waxaa ku heshiiyay shisheeyihii cadawga soomaaliyeed ahaa iyo kan wax ku habsaday.Gumaysigu waxa uu qorsheeyay in dadka noocaan ah lagu hayo kursiga dalkana ka noqdaan madax wayne marwalba si ay ugu raaxaystaan fikirkooda ah in soomaaliya ahaato meel aan dawlad lahayn.Waxay rabeen in xasan soonoqdo,waxay ku leeyihiin baar la maanka hada jira oo ay inagu dhex beerteen dad inala soomaali ah leh midabkeena afkeena oo dadkeenii ah laakiin xanbaarsan afkaartaa guracan ee cadawgeena wayn ee soo jireenka ah.
Hada waxa diidan ciidan xooga dalka soomaaliyeed in la dhiso oo qaylinaya waa xisbigii baroo eithiopianka ahaa ee laynagu dhex beeray oo ah kuwii xasan sheekh doortay hogaaminayayna.waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuulayaan in aysan waligeed helin soomaaliya ciidankii xooga dalka taasoo macnaheedu yahay soomaali yaysan helin dawlad shaqaysa.
ciidan waxay u yaqaanaan kuwii hantida xooga ku haystay oo tuuto loo xiray kuwaas oo xasan sheekh sameeyay intooda badan. ciidan marabo dawladna waan rabaa isma qaban karto?
Fiiro gaara iyo digniin
Waxaan qirayaa in ay jiraan dad wanaagsan oo soomaali ah wadani ah oo dagan mogdisho oo aan haysanin guryo dawlad iyo dad gaaraba leeyihiin midna oo aan haysanin dhul islaameed iyo beero dad leeyahay intaba.markaa mana lihi umana quurayo cadaaladna maha in beelahaas oo dhami sifahaas kor ku xusan wada qabaan ama yihiin ee waa madaxdooda iyo in iyaga ka mid ah.Waxaanse la inkiri karin in inta fiican ee wadaniga ah laga adkaaday oo ay soo ban bixi waayeen.waa kii abshir bacadle lahaa alle ha u naxariistee “WARKADAAYA MAAN MAQAL DUMIYA MOOYAANE!!” mar uu lahadlayay beelaha ciidanka diidan.beeshu maha uun inta yaree ciidanka qaranka diidan iyo inta yaree gumaysiga u adeegaysa sidaa daraadeed intooda badan ee wadaniga ah haka caan hana kahortagaan cadawga iyagoo gacmaha haysta guud ahaan walaalahood soomaaliyeed sidaas ayaan ku guulaysan karaa kuligeen waana in aan dhisanaa ciidan isku dhaf ah oo dalkeena iyo dadkeena difaaca.
Nimanka hada cadaystay oo baarlamaankii ka dhex doobinaya oo cadawga ah hortaagan dawlad soomaaliyeed waa in aan iska qabanaa.dadka soomaaliyeed waa walaalo isku mid ah ee tuug iyo gumaysi u shaqeeye ayaa iskuna keen diraya dadkeenii iyo dalkeeniina baa bi inaya oo inoo diidan sharaf iyo dawladnimo iyo wada noolaansho. yaan loo qaadan in aan beel gaara duulaan ku ahay kol hadaan sheegay dhabta jirta iyo dabinka loo dhigay soomaaliya.
Erdogan ayaa ku wareeray Xasan Shiikh mar uu usoo jeediyey in ciidan qaran u dhiso somaliya,Xasan shiikh ayaa ka warwareegay kulankoodii ayuu mar labaad ku weydiiyey qorshihii dhisida ciidan qaran wuxuu ku jawaabay Itoobiyaa iga calool xumaaneyso.
Hadaba Maamul goboleedyada ayaa sidii Erdogan ku wareeray kuwa ciidmada qaran sheeganaya ee ka qeylinaya Muqdisho iskuna heysta in iyagu yihiin ciidan qaran maamul goboleedyadana ay yihiin ciidan beeleed,